တွစ်တာတွင်အကောင်းဆုံး MEGHAN နှင့် HARRY တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများနှင့်တုံ့ပြန်မှုများ - သတင်း
ဤ ၃၁ Meghan နှင့် Harry တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများသည်အင်တာဗျူးကဲ့သို့မေးရိုးကျဆင်းသကဲ့သို့နီးစပ်သည်
Meghan နှင့် Oprah နှင့်ဟယ်ရီ၏စိတ်အားထက်သန်စွာမျှော်လင့်ထားသည့်အင်တာဗျူးသည်ပြီးခဲ့သည့်ညတွင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်တုန်လှုပ်ဖွယ်အချိန်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ သဘာဝကျကျတွစ်တာသည်ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်မှုများကိုသူတို့သိသည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြင့်တုန့်ပြန်ခဲ့သည် - မှတ်ဉာဏ်ဖြင့်။
နှစ်ခုနာရီအင်တာဗျူး၌တည်၏ Meghan ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် သူမတစ်ချက်မှာမိမိကိုယ်ကိုသတ်သေပုံကို, တော်ဝင်မိသားစုမှအဖွဲ့ဝင် Archi ရဲ့အသားအရေဘယ်လောက်မှောင်မိုက်လာမည်၊ ဟယ်ရီသည်သူ့မိသားစုထံမှငွေရေးကြေးရေးအရမည်သို့ဖြတ်သန်းသွားသည်ကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအင်တာဗျူးသူတို့ကကလေးမိန်းကလေးမျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်ထုတ်ဖော်စုံတွဲနှင့်အတူပိုမိုပျော်ရွှင်အချိန်လေးရှိခဲ့တယ်, သို့သော်သူကအများစုသူစနစ်နှင့်ဘုရင့်အသက်တာ၏ Meghan ရဲ့ခက်ခဲအတွေ့အကြုံအတွက်ပိတ်မိနေကြသည်ယုံကြည်သူကိုသူသည်မိမိအစ်ကိုနှင့်ဖခင်အပေါ်ဟယ်ရီရဲ့အမြင်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။
အဆိုပါ Meghan နှင့်ဟယ်ရီအင်တာဗျူးလက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှုအဓိကအားဖြင့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ဗျာဒိတ်တော်များကိုလူတိုင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုတက်ချုပ်ဖော်ပြပေမယ့်အဆိုပါသရဖူရဲ့နောက်ရာသီလူတိုင်းယခုအဘယ်ကြောင့်မပေးသောကွောငျ့, တစ်ဇွန်းသို့ Buckingham နန်းတော်ကိုဖွင့်ဖို့လိုလားမည်သို့မည်ပုံဖြစ်နှင့်မယ်လို့ဘယ်လောက်ဖရိုဖရဲအကြောင်းကိုလက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှုလည်းရှိကြ၏။
ဤရွေ့ကားပျော်စရာအကောင်းဆုံး 31 Meghan နှင့်ဟယ်ရီအင်တာဗျူး memes:
ငါဒီအင်တာဗျူး၏2မိနစ်တိုင်း pic.twitter.com/oDCMfrojWI
- ခရစ်မာဖီ (@christress) မတ်လ 8, 2021
မင်္ဂလာပါ၊ ယနေ့ည timeline နှင့်ပတ်သက်သောကောလာဟလများထွက်ပေါ်နေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အမှန်တရားများကိုဝေမျှရန်ရှင်သန်ရပ်တည်ချင်ခဲ့သည် pic.twitter.com/eS3WLKDIYT
- David Mack (@davidmackau) မတ်လ 8, 2021
အခုပန်း ဦး ရစ်သရဖူကိုစာရေးဆရာများ '' အခန်း pic.twitter.com/OhiYwpcx1v
- မေယာ (@corrinsfilm) မတ်လ 8, 2021
စီးပွားရေးအရအားလပ်ချိန်တွေမှာ Meghan ကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့ကရင်တွေကိုငါဆွဲထုတ်ခဲ့တယ် #HarryandMeghanonOprah
- ………။ (@YUNGMlAMI) မတ်လ 8, 2021
ငါ meghan rn ဖြစ်လျှင်ငါ့ကို #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/R8wPxwK1as
- လင်ဒါမန်း၊ မတ်လ 8, 2021
သူတို့မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာကြေငြာပြီးတဲ့နောက်ငါဟာ #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/lfS0FuinWx
- ကောင်းချီးမင်္ဂလာ (@ BLM_004) မတ်လ 8, 2021
Meghan နှင့် Harry Oprah အင်တာဗျူးလုပ်နေသော Gogglebox သည် BAFTA နှင့်ထိုက်တန်သည်။
- Daniel Rosney (@DanielRosney) မတ်လ 7, 2021
- Gabrielle Cornish (@ gcornish91) မတ်လ 8, 2021
ကျနော်တို့မိနစ် ၂၀ သာရှိသေးတယ်။ တော်ဝင် PR အသင်းကဖိစီးနေတယ်ဆိုတာငါသိတယ် #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/vWCHJSDS9q
- Gabby (@ Gabby66879) မတ်လ 8, 2021
10. ရဲ့ asap ချ။ ရကုန်အံ့
အဘယ်သူသည် The Crown အပေါ် Tyler Perry ကစားသွားလိမ့်မည်
- ABOLISH DA POLICE 🧛‍♂️ (@israelizreal) မတ်လ 8, 2021
တော်ဝင်မိသားစုဘယ်လိုသူတို့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကို fix နိုင်ပုံ #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/gzogrS4YiY
- Prof.Moriarty⚜ (@KING_MMBJ) မတ်လ 8, 2021
ငါမနက်ဖြန်သူတို့အဘို့အပျော်စရာဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဗြိတိန် twitter, အသံကျယ်အိပ်ပျော်နေသည်မျှော်လင့်ပါတယ် #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/qhPRaNnTyp
- Kristin (@GhostInMyCoffee) မတ်လ 8, 2021
Meghan ကတောင်းပန်ဖို့မှတ်စုတစ်ခုရေးခဲ့တယ်ဆိုတာကို Meghan သေချာအောင်ပြောခဲ့တယ်။ #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/MSDmy8TmdS
မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုထွက်စားရန်အကြံပေးချက်များ
- Jaye (@ Jaye622) မတ်လ 8, 2021
ဒိုင်ယာနာသည်နန်းတော်နှင့်မသက်ဆိုင်သော Harry ထံမှငွေကိုချန်ထားခဲ့သည် pic.twitter.com/t8WCUKrkBQ
- ✨♡𐒛𐒉𐒖♡✨ (@AshaKnobel) မတ်လ 8, 2021
ငါသရဖူ၏အသီးအသီးရာသီစောင့်ကြည့်သောကြောင့်ငါတော်ဝင်အပေါ်ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ကဲ့သို့ပြုမူ pic.twitter.com/wV4rEFvX56
- Angie Thomas (@angiecthomas) မတ်လ 8, 2021
- Ben Rosen (@ben_rosen) မတ်လ 8, 2021
သူတို့ Tyler Perry ရဲ့အိမ်သို့ပြောင်းရွှေ့သူတို့လုံခြုံရေးအတွက်ပေးဆောင်? ဤသည်မှာ fuck ဆိုတဲ့အချိန်အားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးသောအင်တာဗျူးဖြစ်သည်၊ Frost / Nixon ကိုချန်လှပ်ထားပါ၊ သင်၏နေ့ပြီးဆုံးပြီ။
- Sara Benincasa (@SaraJBenincasa) မတ်လ 8, 2021
Meghan ဟာ The Crown ရဲ့နောက်ဆုံးစီးရီးမှာသူကိုယ်တိုင်ကစားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
- ဒန် Rebellato (@DanRebellato) မတ်လ 8, 2021
သူတို့က Buckingham နန်းတော်ကို Tesco ကြီးတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းသင့်တယ်
- 𝘉𝘭𝘢𝘤𝘬𝘣𝘦𝘳𝘳𝘺𝘣𝘢𝘣𝘦 (@jxnnyway) မတ်လ 8, 2021
Meghan ကသူစကားပြောပုံကိုအရမ်းဂရုစိုက်ပေမဲ့ဟယ်ရီကတော့ #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/sHoD7Q6hQk
- ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် (@ShanteleAwesome) မတ်လ 8, 2021
မင်းသမီးဒိုင်ယာနာ: #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/coSt4h5iVv
- Siobhain (@ summer0001) မတ်လ 8, 2021
အသစ်ကျား, မထုတ်ဖေါ်သောဆောင်ပုဒ်ထုတ်ဖော်: Oprah အင်တာဗျူး
- ကေ Tenbarge (@kattenbarge) မတ်လ 8, 2021
ကိုယ့် Tyler Perry လက်ဆောင်များကိုစောင့်ဆိုင်းလို့မရဘူး ngl: Heavy Is the Crown
- ဟန္န Giorgis | Hanna Giorgis (@hannahgiorgis) မတ်လ 8, 2021
25. Meghan နှင့်ဟယ်ရီရဲ့အင်တာဗျူးထိပ်ဆုံးနိုင်ကြောင်းတစ်ခုတည်းသောအရာ
သင့်အိမ်ထောင်ဖက် tinder အပေါ်လျှင်ကြည့်ရှုဖို့ဘယ်လို
- Yann (@yannhatchuel) မတ်လ 8, 2021
၂၆။ အကယ်၍ သူမသည်တာဝန်ရှိခဲ့လျှင်နန်းတော်ကိုဘယ်တော့မျှရောင်းစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
ဘုရင်စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီး Davina ကို Selling Sunset တွင်ဘာကင်ဟမ်နန်းတော်ကိုရောင်းချရန်ကြိုးစားပါ
- jack rem x (@jackremmington) မတ်လ 8, 2021
ဗော့ဒ်ကာ Revs https://t.co/5vJqdPWZIx
- Bolu Babalola (@BeeBabs) မတ်လ 8, 2021
oprah: ဘယ်သူက shit လို့ပြောတယ်
oprah: မင်းကိုဒီ shit လို့ပြောတဲ့ Harry
- ဂျင်းနက် (@ryanswilders) မတ်လ 8, 2021
- အာမက်အလီ (@MrAhmednurAli) မတ်လ 8, 2021
Buckingham နန်းတော်ဆိုတာစာသင်တဲ့ wetherspoons လို့ခေါ်တဲ့ tweet ကိုမှတ်ထားပါ။ ?? ယခုအချိန်သည်ဖြစ်ပျက်ရန်အချိန်ဖြစ်သည်
- GINA TONIC (@GlNATONIC) မတ်လ 8, 2021
Wishing Oprah သည်ဟယ်ရီကဤမှတ်စုတိုနှင့်သူ၏အကြံအစည်များကိုမြင်ဖူးလားဟုမေးခဲ့သည်။ pic.twitter.com/tmJb91gq21
- Theo ဂျိမ်း '' washcloth ။ (@drizzyxcole) မတ်လ 8, 2021
• ဟယ်ရီနှင့်မီဂန်ပြန်နင်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သောဤမှတ်စု ၂၉ ခုသည် OBE ထိုက်သည်
• Harry နှင့် Meghan သည် Netflix နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်နှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များပြုလုပ်ရန်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
• သင်သိရန်လိုအပ်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတော် ၀ င်များအားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း